Apple Tarisa - Iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Pakupedzisira mushure marefu maviri kusvikamakore azere nerunyerekupe uye kufungidzira pamusoro peiyo ingangoita Apple iWatch, mune yekupedzisira Keynote nemusi weChipiri Gunyana 9, 2014 Apple yakatiratidza neayo smart watch. Wachi iyi yataifunga isu tese yaizonzi iWatch nekuda kwemazhinji patent iyo Apple iine zita iri, yakaguma ichinzi e Apple Watch kuoma.
Mukuru wekambani, Tim Cook, akaiisa muKeynote munaGunyana 9, 2014 mushure memutsara wengano uyo waakaita mukurumbira kukambani pachayo apo mushakabvu Steve Jobs akataura nezvayo mu «Chimwezve chinhu ...» Ichi chimwe Chimwe chinhu ndechekutanga kuna Tim Cook munhoroondo yake sa CEO weApple uye haana kumira kukurudzira veruzhinji vanotarisira kuti vateerere zvakare zvavakafarira zvakanyanya.
3 Apple Watch mhando
Apple inopa iyi nyowani yekutarisa kune ruzhinji rwevanhu uye inosimbiswa yakatangwa matatu akasiyana mamodheru uye maviri saizimazera akasiyana pamaoko evarume nevakadzi. Muenzaniso we simbi, mutambo wemitambo we aluminium uye imwe kufona Edition de 18 karati ndarama.
Nenzira iyi, Apple inogumisa kufungidzira uye runyerekupe nekuburitsa izvo zvinonzi ndizvo shamwari yakakwana yezvinhu zvako zveIOS uye kunyanya iyo iPhone.
Mairi ini ndiri kuMac iwe uchawana ruzivo rwese rwekutanga rwekupfeka kwekambani yeapuro yakarumwa kubva pazuva rekutanga rekumisikidzwa kwayo. Nakidzwa ne Apple Watch uye nhau dzako dzese nesu.
Manual ine ese Apple Watch spheres
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 3 mazuva .
Iwe unoziva here kuti pane bhuku rekushandisa raunogona kuona mabasa eimwe neimwe yezvikamu zve ...
kubudikidza Ignacio Sala inoita 1 vhiki .
Iyo Apple Watch yave chishandiso chakanakisa chekutarisa chiitiko chemuviri uye chemitambo chevashandisi….
Apple inononoka simba rekutakura makadhi epamutemo muWallet kusvika 2022
kubudikidza Toni Cortes inoita 1 vhiki .
Apple yakasvetukira mudziva mavhiki mashoma apfuura ichizivisa kuti gore risati rapera, mune dzimwe nyika ...
Apple Watch yekutengesa inoramba ichitungamira musika maererano neCouterpoint Research
kubudikidza Jordi Gimenez inoita Mavhiki e2 .
Apple smart wachi dzakanonoka pamusika asi gore negore dzakazvisimbisa sedzakanyanya ...
Iyo Apple Watch Series 8 haingambo shandura dhizaini zvachose
Asati atanga iyo Apple keynote munaGunyana apfuura mavaifanira kutisuma kune itsva ...
Apple Inoburitsa WatchOS 8.1.1 uye Inogadzirisa Apple Watch Series 7 Kuchaja Nyaya
kubudikidza Manuel Alonso inoita Mavhiki e2 .
Nemaawa mashoma emusiyano pakati pekuvhurwa kweiyo beta nyowani yeApple Watch, kambani yeAmerica ine ...
Kutumirwa kweApple Watch hakuwire pasi pemasvondo mashanu
Chokwadi vazhinji venyu vari kugadzirira tsamba kuVarume Vatatu Vakachenjera gore rino uye munoda kukwanisa ...
Nei iyo Apple Watch Series 7 skrini ndiyo nzira yazviri
kubudikidza Manuel Alonso inoita 1 mwedzi .
Panguva imwe chete iyo Apple yakaratidza MacBook Pro itsva, iyo itsva Apple Watch Series yakaunzwawo munharaunda ...
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 1 mwedzi .
Dambudziko kune veterans nderimwe rematambudziko ayo Apple anoramba achisiya chete kune vashandisi ...
Ndizvo zvakaitawo Nomad Sport Band tambo dzegirini uye grey yeApple Watch
Pasina mubvunzo zvishongedzo zvinonyanya kubudirira pakati pevashandisi veApple Watch ndiwo tambo uye mu ...
Runyerekupe rwekuyedzwa kweglucose yeropa yeApple Watch Series 8 inodzoka
kubudikidza Toni Cortes inoita 1 mwedzi .
Isu tanga tichinzwa runyerekupe kwechinguva nezve sensor nyowani inogona kubatanidza remangwana Apple Watch series: a ...
Dzidza maitiro ekurodha pasi nekumisikidza kunyorera pane yako Apple Watch